CasualAlarm, milalao hira kisendrasendra mba hanaitra antsika | Vaovao IPhone
Isaky ny maraina ny famantaranandro fanairana amin'ny fotoana iray, ary isan'andro ny mozika iray na ny feony mitovy ihany no maneno, izay manery antsika hifoha hanakana ny famantaranandro fanairana falifaly izay avy amin'ny iPhone. Na eo aza ny zava-misy fa manolotra feo be dia be ho antsika i iOS hahafahantsika mifoha nefa tsy mifoha dia tezitra mandre azy ireo foana, rehefa mandeha ny fotoana dia leo antsika izy rehetra ary manomboka mampiasa hira avy amin'ny tranombokintsika isika ka ny asa maharikoriko mifoha dia somary milay kokoa, fa nManery anao hanova tsy tapaka ny hira izy raha tsy te hiafara amin'ny fankahalana ilay hira sy hampifandray azy amin'ny fifohazanay.
Raha mpampiasa jailbreak isika dia afaka mitodika any amin'ny magazay fampiharana Cydia hafa hisintona ilay tweak CasualAlarm, tweak izay mitendry kisendrasendra hira avy ao amin'ny fitehirizam-bokintsika isaky ny maneno ny famantaranandro fanairana, mamadika ity asa sarotra ity hifoha isan'andro ho lasa mahafinaritra kokoa ary mahafinaritra amin'ny mozika ankafizinay. Ity tweak ity dia miasa raha vantany vao apetrakao sy ara-drariny mila manitsy ny angona fanairana izahay raha hisafidianana Random Song ao amin'ny sehatry ny feo tiantsika hifohazana.
Mba hamafana azy dia mila mifidy hira na feo manokana isika, hira na feo izay hanomboka haneno isaky ny tonga ny ora fanairana, ary mamela tsy misy dikany ny safidin'ny hira tsy ampoizina avelan'ny tweak CasualAlarm avelantsika. Toy ny lojika, arakaraka ny hametrahana ireo hira efa notehirizinay tao amin'ny fitaovantsika dia vao mainka hitaky ny famerenany ny tenany rehefa mifoha isika. Ity tweak ity dia azo alaina amin'ny alàlan'ny repo BigBoss maimaim-poana. Mitaky farafaharatsiny mba hiasa ny iOS 9 na taty aoriana.
CasualAlarm Izy io dia tsy miasa afa-tsy amin'ny mozika izay notehirizinay tao amin'ny fitaovantsika, na alaina amin'ny alàlan'ny Apple Music na nafindra avy any iTunes. Tsy mandeha amin'ny rindranasa antoko fahatelo toa an'i Spotify io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 10 » CasualAlarm, milalao hira kisendrasendra mba hanaitra antsika